CLUB GOER က TUP TUP ကိုသူအားဗော့ဒ်ပုလင်းနှစ်ပုလင်းဝယ်လိုက်သည်နှင့်မေ့သောအခါသူသည်သူ့ကိုအားပြန်သွင်းရန်စွပ်စွဲခဲ့သည် - သတင်း
Club goer က Tup Tup ကိုသူအားဗော့ဒ်ပုလင်းနှစ်ပုလင်းဝယ်လိုက်သည်နှင့်မေ့သောအခါသူသည်သူ့ကိုအားပြန်သွင်းရန်စွပ်စွဲခဲ့သည်
နယူးကာဆယ်လ်အသင်းမှကစားသမားတ ဦး က Tup Tup Palace ကိုဒီအင်္ဂါနေ့ကသူမအားအရက်ပိုသောက်စေခြင်းအားဖြင့်သူသည် Absolut Vodka ပုလင်းနှစ်ပုလင်းဝယ်ယူခဲ့ပြီး၎င်းအကြောင်းကိုမေ့သွားသည်ကိုသိသည်။
သူသည်နက်ဖြန်နံနက် Tup Tup နန်းတော်သို့စာတိုပေးပို့ခဲ့သည်။ သူ၏အွန်လိုင်းဘဏ်လုပ်ငန်းတွင်ပေါင် ၈၅.၅၅ ဖြင့်ပေါင် ၈.၅၅ ဖြင့်အရောင်းအ ၀ ယ်ကိုဖော်ပြခဲ့သည်။
သူက“ မနေ့ညကထွက်သွားပြီးအရက်သောက် ၀ ယ်ပြီးဘားမှသေနတ်ဖြင့်ပစ်လိုက်သည်။ ကျွန်ုပ်ဘဏ်လုပ်ငန်းကိုစစ်ဆေးသည့်အခါ၎င်းသည်ပေါင် ၈.၅၅ ဖြစ်သင့်သည့်အချိန်တွင် ၈၅.၅၀ ဖြစ်လာသည်။ Tup Tup ၀ န်ထမ်းများကသူ၏ကြေငြာချက်ကိုကြည့်။ မေးမြန်းကြပြီး၎င်းတို့ကိုကြည့်ရှုမည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။
ကလပ်ရှိဝန်ထမ်းများသည်၎င်းတို့၏ထုတ်ပြန်ချက်များကိုငွေပေးငွေယူနှင့်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်စေသည်။ သူဟာ Absolut Vodka ပုလင်းနှစ်လုံးဝယ်ယူလိုက်တဲ့သူမှတ်မိသေးတဲ့လှည့်ကွက်လေးကိုပဲမဟုတ်ဘဲချက်ချင်းပဲ ၀ ယ်လိုက်တာဆိုတာချက်ချင်းပဲထင်ရှားလာသည်။ လေးလံသော
Tup Tup Palace နှင့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုကိုဖတ်ရှုသူအားလုံးနှင့်အတူဤပျော်စရာကိုတွေ့ခဲ့ရပြီးသူတို့ Facebook စာမျက်နှာတွင်ချက်တင်မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်တင်ခဲ့သည်။
Tup Tup ကိစ္စတွင်အက်
သူတို့ကဒယ်နီယယ်လ်ကိုပြောလိုက်တယ်၊ ဟဲန်နီယယ်လ်၊ မနေ့ညမှာ Tup Tup နန်းတော်၌သင်ဘားတွင်အချိုရည်အချို့ဝယ်ယူခဲ့သည်။ သို့သော်သင်မှတ်မိသည့်အတိုင်းရိုက်ချက်နှစ်ခုသာမဟုတ်ပါ၊ သင်တကယ်တော့ Absolut ဗော့ဒ်ကာပုလင်းနှစ်လုံးဝယ်ခဲ့သည်။
မင်းရဲ့ Online Banking ငွေပေးချေမှုနဲ့ကိုက်ညီတဲ့ငွေလက်ခံဖြတ်ပိုင်းကိုငါပူးတွဲတင်ပြလိုက်ပြီ။ မင်းတို့ညမှာ Tup Tup နန်းတော်၌ပျော်မွေ့ကြမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ '
အသုံးစရိတ်ကြီးသောဒန်နီယယ်လ်က“ ငါမှန်ကန်တဲ့ရွှင်လန်းမှု FUCK haha ​​'” ဂန္ထဝင်။
Tup Tup Palace မှမန်နေဂျာ David Branley-Speirs ကနယူးကာဆယ်လ်ကိုပြောကြားခဲ့သည်မှာ - 'ငါတို့ထင်မြင်ချက်ကို Facebook မှတစ်ဆင့်လက်ခံရရှိပြီးနောက်ချက်ချင်းပင်' အိုဘုရားသခင်၊ ဘား ၀ န်ထမ်းတစ် ဦး သည်ကဒ်ပြားပေါ်မှလူတစ် ဦး အားငွေပိုပေးသည် 'ဟုသင်ထင်နေသည်။
'' ဒါပေမယ့်ပေါင် ၈.၅၀ နဲ့ရိုက်တဲ့နှစ်ခုကဗော့ဒ်ပုလင်းနှစ်လုံးနဲ့ပေါင် ၈၅.၅၀ ကြားမှာကြီးမားတဲ့ခြားနားချက်ပါ။ လူတိုင်းသောက်ပြီးသည်နှင့်တပြိုင်နက်ဘောလုံးသမားတစ် ဦး အနေနှင့်ထိတွေ့ကြသည်ဆိုပါစို့။ သင်ငါ့ကိုမေးလျှင်အစားရယ်စရာ! ငါတို့ရဲ့ပြန်ကြားချက်တွေအားလုံးဟာနောက်တစ်နေ့မှာသူနဲ့တူမယ်လို့ငါသေချာတယ်။
ငါတို့ဒံယေလကိုရှာတွေ့ပြီးသူ့အိပ်မက်အကြောင်းသူ့ကိုပြောပြချင်တယ်မဟုတ်လား။ မင်းသူ့ကိုသိလား? ကျွန်တော်တို့ကို [အီးမေးလ်ကာကွယ်ထား] အပေါ်သိပါစေသို့မဟုတ် Instagram ကိုအပေါ်ကျွန်တော်တို့ကို DM @TheTabNewcastle ။